ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरको आईपीओ यहि माघमा खुल्दै - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरको आईपीओ यहि माघमा खुल्दै
ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरको आईपीओ यहि माघमा खुल्दै
पछिल्लो समय नेपालीहरुमा शेयर प्रतिको चासो बढ्दो छ। चन्द्रागिरीको आईपिओ १७/१८ गुणा आवेदन परेको थियो। त्यो भन्दा पनि अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठुलो आईपिओ नेपाल ईन्फ़्रास्ट्रच्टर बैंकको आईपिओको लागि धेरैले डिम्याट खाता खोलेका थिए। खासमा शेयर गोलाप्रथाबाट पाउने नियम हुन्छ तर नेपाल ईन्फ़्रास्ट्रच्टर बैंकको शेयर ठुलो संख्यामा आवेदेन खुलेका कारण सबैले पर्ने निश्चित भएकाले पनि पछिल्लो एक महिनामा लाखौको संख्यामा डिम्याट खाता खुले।
पछिल्लो समय ठुला ठुला कम्पनीको आईपिओ खुल्ने क्रम जारि छ। ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेडले माघ २३ गतेदेखि सर्बसाधारणको लागि आईपीओ विक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिशेयर रू. १०० अंकित मूल्यको ३४ लाख ९६ हजार ४०० कित्ता शेयर विक्री गर्न लागेको हो । यस अघि आयोजना प्रभावित स्थानियलाई आईपीओ विक्री खुला गर्दा वितरण हुन नसकेको १६ लाख ८६ हजार ४०० कित्ता समेत जोडेर कम्पनीले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न लागेको हो ।
कुल कित्तामध्य १ लाख ७४ हजार ८२० कित्ता शेयर सामूहिक लगानीकोषको लागि र ६९ हजार ९२८ कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीमा बाँडफाँट गरी बाँकी ३२ लाख ५१ हजार ६५२ कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागिएको हो । यो आईपीओ खरिदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म छिटोमा माघ २७ गते र ढिलोमा फागुन ७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीको आईपीओलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी बी प्लस (आइएस) रेटिङग प्रदान गरेको छ । उक्त रेटिङ्गले निष्कासनकर्ता कम्पनी वित्तीय दायितव पुरा गर्न उच्च जोखिममा रहेको संकेत गर्दछ । यो आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा बिओके क्यापिटल रहेको छ ।
विक्री प्रबन्धसँगै आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । साथै मेरो शेयर सफ्टवेयर र मेरो शेयर मोवाइल एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । यो आईपीओ विक्री गर्न कम्पनीले माघ २ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको थियो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ४४ करोड रहेको छ । सर्वसाधारणलाई पनि शेयर विक्री गरेपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ८० करोड पुग्नेछ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी रू. २ अर्ब ५० करोड रहेको छ । यस कम्पनीले खानीखोला १ जलविद्युत आयोजना सञ्चालक गरिरहेको छ । नयाँ आयोजना निर्माणको क्रममा कम्पनीले दोलखाजिल्लामा ४० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । उक्त आयोजनाबाट २०७८ वैशाख देखि विद्युतको व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गर्ने योजना कम्पनीको रहेको छ ।
Previous article१९ वर्षीया सृष्टि बन्दैछिन् एकदिने मुख्यमन्त्री
Next articleमुख्यमन्त्री शेरधन राईको बिवाह सम्पन्न
मंसिर २२ गते लगनगाँठो कस्दै अभिनेत्री श्वेता खडका
फिल्म पढ्न चाहाने २४ विद्यार्थीहरुलाई ओस्कारको छात्रवृत्ति